चाकडीको कति मीठो हुन्छ चास्नी - हिपमत
‘अब अमेरिकाबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री बनाउने त होला नि’ – यो सामाजिक सञ्जालतिर गरिएको आलोचना वा बद्ख्वाइँ मात्र हैन, मान्छेमा सवार हुने डरलाग्दो महवाकांक्षाको प्रतिबिम्ब पनि हो । डा.युवराज खतिवडा अमेरिकाका लागि राजदूतमा प्रस्तावित भएपछि अधिकांश असन्तुष्ट मानिसले उनलाई गाली हैन बरु विभिन्न शैलीमा व्यंग्य गरेका छन् डा. खतिवडाले केही कर्मचारीसँग गरेको एउटा कुराकानीले यस्तै बुझाउँछ । ‘कहिल्यै राजनीति नगरेका खिलराज रेग्मी पनि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका नाममा प्रधानमन्त्री नै भएका होइनन् र ? के त्यस्तो परिस्थिति फेरि आउँदैन र ?’ उनका ज्वाइँ डा. रामशरण खरेलले आफूलाई जिस्क्याउनेहरुको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा बसेर यसरी प्रतिवाद गर्न थालेका हुन् ।